1 September 2015 Conversation Zimbabwe
“Mbuya Nehanda kufa vachishereketa, kuti tinotora sei nyika ino? Shoko rimwe ravakatiudza tora gidi uzvitonge.” Without a doubt, most Zimbabweans are familiar with this song; a … Continue reading Of skulls and diesel…
Culture, Politics, Society, Zimbabwe1 Comment
12 January 2015 2 June 2015 Conversation Zimbabwe
Accountability is something I have always wanted to explore and discuss, particularly within the Zimbabwean context. Accountability seems to have lost its meaning and has become … Continue reading Of accountability (or lack of) in Zimbabwe